मोजामा कागती राख्दा के फाइदा हुन्छ ? - Nepal's No.1 News portal
मोजामा कागती राख्दा के फाइदा हुन्छ ?
एजेन्सी । गर्मी सुरु हुनेवित्तिकै खुट्टाको पैतला फाट्न थाल्छ । पैतला यस्तो नराम्रोसँग फाट्छ कि ठ्याक्कै मजदुरजस्तै देखिन्छ । यस्तोमा तपाई फाटेको पैतला बचाउन विभिन्न उपाय अपनाउनुहुन्छ । तर, सबै उपायले पनि कुनै असर गरेन भने एकपटक अपनाउनुस् यो उपाय । कहिले निराश हुनु हुनेछैन्।
गर्मी सुरु हुनेवित्तिकै खुट्टा रुखो हुन र पैतला फाट्न सुरु हुन्छ । सबै तरिकाका क्रिम, ढुंगामा खुट्टा घिसार्नु तथा अन्य सबै उपायले खासै काम गर्दैन् । तर, निराश हुनुपर्दैन् । यस्तो अवस्थामा कागतीको रामबाण उपाय अपनाउनुस् । यसबाट तपाईको खुट्टा र पैतला नरम रहनेछ र सुन्दर र कोमल देखिनेछ।
मोजामा कागती राखेर सुत्नुस् : यसका लागि तपाईले राति काटेको आधा भाग कागती मोजामा राखेर सुत्नुपर्छ । यसले रातभर तपाईको पैतला माश्वराइज हुनेछ जसबाट गर्मीमा पैतला फाट्ने समस्या हुनेछैन् छुटकारा मिल्नेछ।
यसरी गर्नुस् कागतीको प्रयोग: सकिन्छ भने कागतीलाई पुरै खुट्टामा र तलवों (खुट्टाको तलतिरको भाग)सम्म घिसार्नुस् ।
फेरि बचेको कागतीबाट पुरै पैतला कभर गर्नुस् । (जसमा रस बाँकी छ)
ठूलो आकारको कागती लिनुस् जसले पुरै पैतला कभर गरोस् ।
अब मोजा लगाउनुस् ।
मोजामा कागतीलाई एकदेखि दुई घण्टासम्म राख्न सक्नुहुन्छ । राम्रो परिणामका लागि पुरै कागतीलाई खुट्टामा राख्नुस् । सुरुआतको दिनहरुमा तपाईले तपाईको खुट्टा र पैतला देखेर हैरान हुनुहुनेछ । कागतीको रस केमिकल पीलिंग जस्तैगरी काम गर्छ जो पैतला फाटेको र ड्राइ स्कीन (सुक्का छाला) उतारेर नयाँ स्कीन ल्याउनमा मद्दत गर्छ । साथै नयाँ स्कीनलाई नरम र कोमल बनाएर राख्छ । यसको परिणाम दोस्रो दिनबाट नै देखिन सुरु हुन्छ।
मोजामा कागती राख्नुका फाइदाः
फाटेको पैतला ठिक हुन्छ।
खुट्टाको ड्राइनेस (सुक्कापन) दूर राख्छ।
पैतला फाट्नबाट बचाउँछ।
तलबों (खुट्टाको मुनीको भाग) मुलायम राख्छ।
खुट्टालाई सफा राख्छ।
खुट्टालाई गोरो बनाउँछ।
खुट्टालाई माश्राइज गर्छ।